Sharikadda Diyaaradaha samaysa ee Boeing oo farqaha lagu dheganyahay | Warmaalnews.com
Sharikadda Diyaaradaha samaysa ee Boeing oo farqaha lagu dheganyahay
Shirkadda diyaaradaha soo saarta ee dalka Maraykanka ee Boeing ayaa sheegtay in ay wax ka badeleyso habka hagista diyaaraddaha ee ay ku rakibtay gaadiidkeeda Boeing 737 Max oo ah nooca ku lugta lahaa labo shil oo waaweyn oo dhacay sannad gudihiis.
Balse lama hubo goorta diyaaradahan loo ogolaan doono in ay markale hawada galaan kadib markii lasoo fariisiiyay adduunka oo dhan. Tan ayaa ka dambeysay shilkii 10-kii bishan ee dalka Itoobiya oo ay ku dhinteen 159 qof.
Baarayaasha ayaanan weli kala hubsanin sababta shilka Itoobiya dhalisay, balse waxaa loo malaynayaa in uu sababay barnaamijka kaligiis is haga ee diyaaradda ku rakiban.
Shirkadda ayaa sheegtay in ay diyaaradda ku rakibi doonto habka digniinta hore bixiya, kaas oo markii hore ahaa arrin diyaaradaha ay u madax banaanyihiin in ay iyaga xushaan in ay ku xirayaan diyaaradda iyo in kale.
Habkan digniinta hore ayaa duuliyaha u sheegaya marka ay diyaaradda hesho amaro kala is khilaafsan.
Boeing waxa ay warbaahinta u sheegtay in cillad bixinta aysan ka dhignayn qirasho ah in shilka uu ka dhashay cillad ka timid dhanka diyaaradda.
Balse sheekada Boeing ma ahan mid halkaas kusoo afjarantay, guddiga amniga gaadiidka cirka ee Aqalka Sare ee Maraykanka ayaa su’aalo weeydiiyay madaxa Hay’adda Socdaalka Hawada ee FAA Daniel Elwell.
Xildhibaan Richard Blumenthal ayaa sheegay in shaqaalaha diyaaradda sameeya lagu haleeyo hubinta in diyaaradda ay tahay mid ku habboon in ay dad qaaddo, taas oo uu yiri in ay ka dhigantahay “dawacada oo arriga lagu dhaafay in ay sii illaaliso”, isaga oo ula jeeda in shaqadan ay ahayd in ay qabato FAA oo ah hay’adda kormeerka iyo hubinta badqabka gaadiidka hawada.
FAA ayaa lagu eedeeyay in ay ahayd hay’addii ugu dambeysay adduunka ee qaadatay go’aanka ah in diyaarada Boeing 737 lasoo fariisiiyo.
Image captionBoeing 737 Max
Todobaadkan ayaa la filayaa in lasoo saaro natiijada baaritaan wadajir ah oo lagu sameeyay shilkii diyaaraddii Itoobiya.